Salamo 9 sy 10 - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-01 mpandimby ny Magazine > Salamo 9 sy 10
Mifandray ny Salamo faha-9 sy faha-10. Amin’ny teny hebreo, saika ny andalana tsirairay amin’izy roa dia manomboka amin’ny litera manaraka ny abidy hebreo. Fanampin’izany, ireo Salamo roa ireo dia manantitrantitra ny fahafatesan’ny olombelona (9, 20; 10, 18) ary samy miresaka momba ny Jentilisa (9, 5; 15; 17; 19-20; 10, 16 ). Ao amin’ny Septante, ireo salamo roa ireo dia voatanisa ho iray.
Ao amin'ny Salamo faha-9, midera an'Andriamanitra i David noho ny nampisehoany ny fahamarinany teo amin'ny mpitsara amin'izao tontolo izao ary noho izy mpitsara marina sy mandrakizay izay ametrahan'ny olon-dratsy ny fitokisany.
Ny mpitendry mpihira. Almuth Labben. Salamo. Avy amin’i Davida. Te hidera [anao] aho, Tompo ô, amin’ny foko rehetra, te-hitantara ny fahagaganao rehetra aho. Ao aminao no te hifaly sy ho ravoravo, hihira ny anaranao aho, ry Avo Indrindra, raha mihemotra ny fahavaloko, lavo sy ringana eo anatrehanao. Fa efa notanterahinao ny teniko sy ny teniko; eo amin'ny seza fiandrianana ianao, mpitsara marina. Niteny mafy ny firenena Hianao ka nanome ny ratsy fanahy, namafa ny anarany mandrakizay doria; tapitra ny fahavalo, rava mandrakizay; noravanao ny tanàna, voafafa ny fahatsiarovana azy. Mipetraka mandrakizay ny TOMPO, nanangana ny seza fiandrianany ho fitsarana Izy. Ary hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana Izy ary hitsara ny firenena amin'ny fahamarinana. Fa ny Tompo dia fanasana lehibe ho an'ny ampahorina, fety lehibe amin'ny andro fahoriana. Matokia Anao izay mahalala ny anaranao; fa tsy foinao izay mitady Anao, Tompo ô. Mihirà ho an'i Jehovah, Izay monina ao Ziona, ambarao any amin'ny firenena ny asany! Fa izay manadihady ny amin'ny rà nalatsaka dia mihevitra azy; tsy nanadino ny fitarainan'ny ory Izy. Nolazaina tamin’i Davida io salamo io ary tokony hohiraina amin’ny feon’ny hoe Maty ho an’ny Zanaka, araka ny vakintsika ao amin’ny fandikan-teny hafa. Na izany aza, tsy mazava ny dikan'izany. Ao amin'ny andininy 1-3, i David dia nidera fatratra tamin'Andriamanitra, nitantara ny fahagagana nataony ary faly tao aminy fa faly sy nidera azy. Fahagagana (ny teny hebreo midika hoe zavatra miavaka) dia matetika ampiasaina ao amin’ny Salamo rehefa miresaka momba ny asan’ny Tompo. Ny anton’ny fiderana an’i Davida dia voalaza ao amin’ny andininy faha-4-6. Andriamanitra dia mamela ny rariny hanjaka (and. 4) amin'ny fijoroana ho an'i David. Nihemotra ny fahavalony (and. 4) ary hovonoina (and. 6) ary na dia ny firenena aza dia naringana (and. 15; 17; 19-20). Ny famaritana toy izany dia maneho ny fihenan'izy ireo. Tsy ho voatahiry na dia ny anaran’ny mpanompo sampy aza. Tsy hisy intsony ny fahatsiarovana sy ny fahatsiarovana azy ireo (and. 7). Izany rehetra izany dia mitranga satria Andriamanitra, hoy i David, dia Andriamanitra marina sy marina ary milaza ny fitsarana ny tany amin'ny seza fiandrianany (and. 8f). Nampiharin’i Davida tamin’ny olona niharan’ny tsy rariny koa io fahamarinana sy fahamarinana io. Ireo izay nampahorina, tsy niraharaha ary nanararaotan'ny vahoaka dia hatsangan'ny mpitsara marina. Ny Tompo no fiarovana sy fiarovana ho azy ireo amin'ny fotoan-tsarotra. Koa satria ampiasaina indroa ny teny hebreo nadika hoe fialofana ao amin’ny andininy faha-9, dia azo heverina fa ho zava-dehibe ny fiarovana sy ny fiarovana. Amin'ny fahalalana ny fiarovana sy ny fiarovan'Andriamanitra dia afaka matoky azy isika. Ny andininy dia mifarana amin'ny fananarana ho an'ny olona, ​​indrindra ireo izay tsy manadino Andriamanitra (and. 13). Nangataka azy ireo hidera an’Andriamanitra izy (V2) sy hilaza izay nataony ho azy ireo (and.
Mamindrà fo amiko, Tompoko! Jereo ny fahoriako avy amin'ny fahavaloko, ka hampiakarinao hiala amin'ny vavahadin'ny fahafatesana aho, mba hiderako ny fiderana anao rehetra eo am-bavahadin'i Ziona zanakavavy, ka hifaliako amin'ny famonjenao. Lentika any an-davaka izay nanao azy ny firenena; voafandrika amin'ny fandrika nafeniny ny tongony. Jehovah efa naneho ny tenany ka nanao fitsarana; Ny olon-dratsy dia voafandrika amin'ny asan'ny tànany. Higgajon. Enga anie ny ratsy fanahy hiverina ho any amin'ny fiainan-tsi-hita, dia ny firenena rehetra izay manadino an'Andriamanitra. Fa tsy hohadinoina mandrakizay ny mahantra, ho very mandrakizay ny fanantenana ny mahantra. Mitsangàna, Tompoko, tsy misy herisetra ny lehilahy! Hotsaraina eo alohanao ireo firenena! Apetraho aminy ny tahotra, Tompoko! Enga anie ireo firenena hahafantatra fa olombelona izy ireo!
Noho ny fahafantarany ny fanavotana avy amin’Andriamanitra, dia niantso an’Andriamanitra i Davida mba hitenenany aminy ao anatin’ny fijaliany ary hanome azy antony hiderana azy. Nangataka tamin'Andriamanitra izy mba ho hitany fa enjehin'ny fahavalony izy (and. 14). Tao anatin’ny loza ateraky ny fahafatesana no niantsoany an’Andriamanitra hanafaka azy amin’ny vavahadin’ny fahafatesana (and. 14; jereo Joba 38, 17; Salamo 107, 18, Isaia 38, 10). Rehefa voavonjy izy dia hilaza amin’ny olona rehetra ny fahalehibiazan’Andriamanitra sy ny voninahiny ary hifaly ao am-bavahadin’i Ziona (and. 15).
Nanatanjaka ny vavak’i Davida ny fatokisany lalina an’Andriamanitra. Ao amin'ny andininy 16-18 dia miresaka momba ny fiantsoan'Andriamanitra ny faharavan'izay manao ratsy i David. Ny andininy faha-16 angamba dia nosoratana teo am-piandrasana ny handringanana ny fahavalo. Raha izany no izy, dia niandry an’ireo fahavalony ho latsaka tao an-davaka i Davida. Fa ny fahamarinan'i Jehovah dia fantatra eny tontolo eny, toy ny niandohan'ny ratsy nataon'ny tsy marina. Mifanohitra amin’ny an’ny mahantra ny anjaran’ny ratsy fanahy (and. 18-19). Tsy ho very ny fanantenanao fa ho tanteraka. Ireo izay mandà sy tsy miraharaha an'Andriamanitra dia tsy manana fanantenana. Ny Salamo faha-9 dia mifarana amin’ny vavaka mba hitsanganan’Andriamanitra ka hanjaka ary hampanjaka ny rariny. Ny fitsarana toy izany dia hahatonga ny Jentilisa hahatsapa fa olombelona izy ka tsy afaka mampahory izay matoky an’Andriamanitra.
Ao amin'ity salamo ity, nanohy ny fivavahany avy ao amin'ny Salamo faha-9 i David tamin'ny fangatahana an'Andriamanitra tsy hiandry ny fitsarana azy intsony. Nofaritany ny herin'ny ratsy fanahy an'Andriamanitra sy ny olona, ​​ary avy eo dia niady tamin'Andriamanitra mba hijoro sy hamaly faty ny mahantra amin'ny fandringanana ny ratsy fanahy.
Fa maninona, Tompoko, no mijanona eny lavitra eny, manafina amin'ny fotoam-pahoriana? Manenjika ny mahantra amin'ny fiavonavonana ny ratsy fanahy. Voataonan'ireo fanafihana noforonin'izy ireo ianao. Fa ny ratsy fanahy mirehareha noho ny fanirian'ny fanahiny; ary ny mpaniratsira mpierina dia manamavo ny Tompo. Ny ratsy fanahy [mieritreritra] mieboebo: Tsy hanadihady izy. Tsy andriamanitra io! dia ny heviny rehetra. Mahomby foana ny lalany. Avo dia lavitra azy ny fitsaranao; ny fahavalony rehetra dia mamely azy. Hoy izy tao am-pony hoe: Tsy hangozohozo aho, na amin'ny firaisana na amin'ny firaisana, tsy misy fahantrana. Feno ozona sy hafetsena ary fampahoriana ny vavany; Eo ambanin'ny lelany ny fahoriana sy ny loza. Mipetraka ao amin'ny fanotrehana ny kianja izy; ao amin'ny fierena no namonoany ny marina; ny masony mijery ny mahantra. Miery any amin'ny fierena toy ny liona ao amin'ny kirihitrala izy; manotrika hisambotra ny mahantra izy; tratrany ny mahantra amin'ny fisintomana azy ho eo amin'ny haratony. Mamontsina, miondrika izy; ary ny mahantra dia potraky ny heriny. Hoy izy tao am-pony hoe: Andriamanitra efa nanadino, nanafina ny tavany, tsy mahita mandrakizay izy!
Ny tapany voalohany amin’ity salamo ity dia milazalaza ny herin’ny ratsy fanahy. Tamin’ny voalohany dia nitaraina tamin’Andriamanitra ny mpanoratra (angamba i Davida), izay toa tsy miraharaha izay ilain’ny mahantra. Manontany izy hoe nahoana Andriamanitra no toa tsy ao anatin’izany tsy rariny izany. Ny fanontaniana maninona dia fanoharana mazava momba ny fahatsapan'ny olona ampahoriana rehefa mitaraina amin'Andriamanitra izy ireo. Mariho ny fifandraisan’i Davida sy an’Andriamanitra tena marina sy misokatra.
Ao amin’ny andininy faha-2-7 dia namelabelatra momba ny toetran’ireo fahavalo i Davida avy eo. Amin’ny avonavona sy ny fieboeboana ary ny fitiavam-bola (and. 2) dia mamely ny malemy ny ratsy fanahy ary miteny an’Andriamanitra amin’ny teny vetaveta. Ny ratsy fanahy dia feno avonavona sy fahalalahan-tanana ary tsy manome toerana ho an’Andriamanitra sy ny didiny. Ny olona toy izany dia mahazo antoka fa tsy hiala amin'ny faharatsiany. Mino izy fa afaka manohy ny asany tsy misy sakantsakana izy (and. 5) ary tsy hahita zava-tsarotra izy (and. 6). Diso sy manimba ny teniny ary miteraka fahasahiranana sy loza izany (and 7).
Mitsangàna tompoko! Atsangano Andriamanitra ny tananao! Aza adino ny ory! Fa maninona no avela hanao tsinontsinona an 'Andriamanitra ny ratsy fanahy, miteny ao am-pony hoe: "Tsy hanontany ianao?" Hitanao izany, ho anao, mijery fahasahiranana sy alahelo ianao hitondranao izany eo am-pelatananao. Ny mahantra dia ny kamboty mamela anao; mpanampy ianao. Torotoroy ny sandrin'ny ratsy fanahy sy ny meloka! Mahatsapa ny faharatsiany ka tsy ho hitanao intsony! Mpanjaka ny Tompo mandrakizay doria; nanjavona tsy ho amin'ny taniny intsony ireo firenena. Efa renao, Tompoko, ny mpandefitra; manamafy ny fony ianao, avelao ny sofinao hihaino, mba hamoronana fahamarinana ho an'ny kamboty sy ny ampahorina, mba tsy hisy hihemotra intsony eto an-tany intsony amin'ny ho avy.
Tao anatin'ny vavaka nataony tamim-pahatsorana mba hamaliana sy hamaly faty dia niantso an 'Andriamanitra i David mba hitsangana (9, 20) ary hanampy ny tsy manan-kery (10, 9). Ny antony iray mahatonga an’io fangatahana io dia ny tsy tokony hamelana ny ratsy fanahy hanao tsinontsinona an’Andriamanitra sy hino fa ho afaka amin’izany izy. Tokony ho voatosika hamaly ny Tompo satria ny malemy dia matoky fa hitan’Andriamanitra ny filany sy ny fahoriany ary Izy no mpanampy azy (and. 14). Manontany manokana ny amin’ny fandringanana ny ratsy fanahy ny mpanao salamo (and. 15). Eto koa, ny famaritana dia tena sary: ​​manapaka ny sandrinao mba tsy hanananao hery intsony. Raha tena manasazy ny ratsy fanahy toy izao Andriamanitra, dia tsy maintsy hamaly ny fanontaniany izy ireo amin'ny zavatra ataony. Tsy afaka nilaza intsony i David avy eo fa tsy miraharaha ireo ampahoriana Andriamanitra ary mitsara ny ratsy fanahy.
Eo amin’ny andininy faha-16-18 dia mifarana amin’ny fahatokian’i Davida ny Salamo fa nihaino azy Andriamanitra tamin’ny vavaka nataony. Toy ny ao amin’ny Salamo faha-9, dia manambara ny fitondran’Andriamanitra izy na dia eo aza ny toe-javatra rehetra ( and. 9, 7 ). Ho faty izay mijoro amin’ny lalany (and. 9, 3; 9, 5; 9, 15). Azon'i David antoka fa hohenoin'Andriamanitra ny fitalahoana sy ny fitarainan'ny ampahorina ary handray andraikitra ho azy ireo izy mba tsy hanana fahefana amin'izy ireo intsony ny olon-dratsy, izay olombelona ihany (9).
Napetrak'i Davida teo anatrehan'Andriamanitra ny fony. Tsy matahotra ny hilaza aminy ny ahiahiny sy ny fisalasalany izy, na dia ny fisalasalany mikasika an’Andriamanitra aza. Raha manao izany izy dia ampahatsiahivina fa mahatoky sy manao ny rariny Andriamanitra ary ny fotoana tsy hisehoan'Andriamanitra dia misy vetivety. Zava-poana ve ilay izy? Hekena Andriamanitra fa iza izy: izay miahy, manohana ny tsy misy ary miteny ny ratsy ho an'ny ratsy izy.